Tag: fanohanana video | Martech Zone
Tag: fanohanana video
Ny chat video dia mandeha matetika amin'ny tranokalan'ny orinasa sy ny sehatra ecommerce
Alarobia, Septambra 26, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Salesforce dia namoaka lahatsoratra amin'ny antsipiriany sy ny sary momba ny fiantraikany sy ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny resaka video ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Io fantsom-panompoana ho an'ny mpanjifa io dia mampifangaro ny fahafaha-miaina amin'ny resaka mivantana sy antso an-tariby miaraka amin'ny horonan-tsary manokana. Miaraka amin'ny bandwidth marobe, haingam-pandeha 5G eo an-jorony, ary fanatsarana lehibe amin'ny teknolojia fifandraisan-davitra, tsy isalasalana fa hitombo ny fiantraikany amin'ny resaka video. Gartner dia manombana fa mihoatra ny 100 amin'ireo
Ny fanohanana horonan-tsary amin'ny mailaka dia mitombo - ary miasa
Alakamisy Oktobra Oktobra 24, 2013 Alakamisy Oktobra Oktobra 24, 2013 Douglas Karr
Miaraka amin'ny fikarohana lalina be dia be, ireo moanina indray dia namorona infographic hafa mahaliana ao amin'ny Video Email. Ity infographic ity dia manome statistika sarobidy momba ny antony ilàna ny fampiasana video amin'ny mailaka ilaina, fomba tsara indrindra hampidirana horonan-tsary amin'ny mailaka ary angano sasany mifandraika amin'ny fampiasana horonan-tsary amin'ny mailaka. Ity infographic ity dia hitarika anao amin'ny alàlan'ny maha-zava-dehibe ny fampiasana horonan-tsary amin'ny alàlan'ny mailaka, karazana mailaka video hafa, angano mifandraika amin'ny fampiasana horonan-tsary amin'ny